Real Estate Management System | PRO-X Software Solution
အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း များအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဆွဲထားသော ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း၏ နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်မှုများကို များစွာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည့်အပြင်၊ လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ချက်ခြင်း ထုတ်ကြည့် နိုင်သောကြောင့် အချိန်ကုန် သက်သာစေမည် ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်း နှင့်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရန် အတွက်ဖြစ်သည်။ (Name, Phone, Email, etc.)
- Estate Type
Estate Type များကို အသစ်တိုးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ (Condo, Apartment, Office, etc.)
- State Region
တိုင်း၊ ပြည်နယ် များကို အသစ်တိုးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။
တိုင်း၊ ပြည်နယ် အလိုက် ခရိုင်များကို အသစ်တိုးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
တိုင်း၊ ပြည်နယ် အလိုက် မြို့နယ်များကို အသစ်တိုးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
- Staff New
ဝန်ထမ်း စာရင်းများ အသစ်ထည့်သွင်း နိုင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်း အသစ်ဝင်တိုင်း ထည့်သွင်းပေးရမည် ဖြစ်သည်။
ထည့်သွင်းထားသော ဝန်ထမ်းစာရင်းများအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
- Estate New
Property များကို အရောင်း၊ အငှားအလိုက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်တကွ ထည့်သွင်း နိုင်ပါသည်။ Estate Status အလိုက် ရောင်းပြီး၊ ငှားထားပြီး၊ အချက်အလက်များ တိကျခြင်း၊ မတိကျခြင်းများကို ခွဲခြား ထားနိုင်မည်။
- Estate List
ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။
- Estate History
Estate တစ်ခုခြင်းအလိုက် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ တွေ့စုံမှုများကို မှတ်သားထားနိုင်ပါသည်။
- Estate Searching
Estate များကို အရောင်း၊ အငှား အလိုက်၊ တိုင်း/ပြည်နယ် အလိုက်၊ မြို့နယ်အလိုက်၊ Estate Type အလိုက်၊ စျေးနှုန်းများ အလိုက်၊ Keywords များအလိုက် ထည့်သွင်း ရှားဖွေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Filter အလိုက် ထွက်ရှိလာသော Result များကို အသေးစိတ် ပြန်ကြည့်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
- Rent New
အငှားထည့်သွင်းထားသော အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ များအတွက် အိမ်ငှားပွဲဖြစ်သည့် အချိန်တွင် ထည့်သွင်းရန် အတွက် ဖြစ်သည်။
- Rent List
အငှားထည့်ထားသော အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ များကို ပြင်ဆင်လိုသည့် အချိန်တွင် အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ အငှားရက်စွဲအလိုက် ၄င်း၊ အချက်အလက်များအရ ၄င်း ရှာဖွေပြီး ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ် နိုင်သည်။
- Due Reminder
အငှားပြည့်ဖို့ (၁) လ အလိုတွင် အလိုအလျောက် Reminder တွင်ပြပေးပါမည်။ ရက်စွဲအလိုက်ဖြင့်လည်း အချိန်ပြည့်မည့် အငှားများကို ရှာဖွေ နိုင်ပါသည်။
- Customer New
မိမိ လုပ်ငန်းသို့ လာရောက် စုံစမ်းထားသော Customer များကို ထည့်သွင်း ထားနိုင်ပါသည်။ ဝယ်လို၊ ငှား လိုသော မြို့နယ်၊ စျေးနှုန်း များအလိုက် ထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။
Customer များ၏ အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
- Customer Requirement Searching
မြို့နယ် အလိုက်၊ စျေးနှုန်း အလိုက် အလွယ်အကူ ရှာဖွေ နိုင်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။
P & L Module
- Income New
ဝင်ငွေများကို အမျိုးအစားအလိုက်၊ ဘောင်ချာများ အလိုက် ထည့်သွင်း နိုင်သည်။
- Income List
ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ် နိုင်သည်။
- Expense New
အသုံးစရိုက် များကို အမျိုးအစားအလိုက်၊ ဘောင်ချာများ အလိုက် ထည့်သွင်း နိုင်သည်။
- Profit & Loss Detail & Summary
ထည့်သွင်းထားသော ဝင်ငွေ၊ အသုံးစရိတ်များအလိုက် Profit & Loss ကို သိရှိ နိုင်ပါသည်။
- User New
Software အသုံးပြုမည့် User များကို အသစ် သတ်မှတ် နိုင်သည်။
User များကို ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ User Role, Password & etc. များကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
- User Role & Permission
အသုံးပြုသူ User အလိုက် Role & Permission များကို သတ်မှတ်ထား နိုင်ပါသည်။ Role အလိုက် Delete ပြုလုပ်ခွင့် ရှိ၊ မရှိ သတ်မှတ်ထား နိုင်ပါသည်။ Menu တစ်ခုခြင်း အလိုက် အသုံးပြုခွင့် ရှိ၊ မရှိကို Permission တွင် သတ်မှတ်ထား နိုင်ပါသည်။
Software နှင့်ဆိုင်သော အချက်အလက်များအားလုံးကို အလိုအလျောက် Backup ပြုလုပ်ခြင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
Real Estate အလိုက် ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သော Reports များ အသင့်ပါဝင်ပြီး ဖြစ်သည်။
- User Requirement Reports
Customized reports များကိုလည်း လိုအပ်ချက်အရ ဆောင်ရွက် ပေးမည် ဖြစ်သည်။
Phone : +95 9778915075 , +95 9954915075
Facebook : www.fb.com/proxsoftwaresolution
ကြည့်ရှု့သူများ : 5191